China HRB400 Birta Rebar ee warshadda dhismaha iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
HRB400 Steel Rebar ee dhismaha
Rebarka birta waxa sidoo kale loo yaqaanaa birta duuban ee kulul.Rebarka birta la xoojiyey ee kulul ee caadiga ah waxaa asteeyay HRB iyo dhibicda ugu yar ee wax soo saarka.H, R, B siday u kala horreeyaan ergada Kulul duuban, Ribbed, Birta birta (baararka) saddexda kelmadood ee ugu horreeya alifbeetada Ingiriisiga.
2.Grade: Q195,Q235,Q345,HRB335,HRB400,HRB500, iwm
Rebar birta ah waa bir bir ah oo leh dusha feeraha, sidoo kale loo yaqaan birta ribbed.Xoojinta feeraha waxay inta badan xanbaarsan tahay culeyska culeyska ee shubka.Biraha birta jeexjeexan waxay si fiican u xamili karaan xoogga dibadda sababtoo ah awooddooda adag ee isku xidhka shubka.Biraha feeraha ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa dhismayaal kala duwan, gaar ahaan kuwa waaweyn, kuwa culus iyo kuwa khafiifka ah ee dhismayaal dhaadheer leh.
1.Tayada dusha sare.Heerarka ku habboon ayaa qeexaya tayada dusha sare ee birta birta ah, taas oo u baahan in dhamaadka si toos ah loo gooyo, dusha sare waa inuusan lahayn dildilaacyo, nabarro iyo laalaab, mana jiraan cillado waxyeello leh oo la isticmaalo.
2.Qiimaha la oggol yahay ee leexashada cabbirka.Heerka foorarsiga ee birta rebar iyo qaabka joometeriga ee rebar birta ayaa lagu qeexay heerar khuseeya.
3. dildilaaca, nabarrada iyo laalaabyada waa in aan loo oggolaan dusha birta birta ah.
4. Kuuskuus ayaa loo ogol yahay dusha sare ee biraha birta ah, laakiin waa in aanay dhaafin dhererka feeraha transverse.Qoto dheer iyo dhererka cilladaha kale ee dusha sare ee birta birta waa inaysan ka weynaan leexinta la oggol yahay ee cabbirka qaybahooda.
Bir-tareenka birta ayaa si weyn loogu isticmaalaa dhismaha injineernimada madaniga ah sida guryaha, buundooyinka iyo waddooyinka.Laga soo bilaabo waddooyinka waaweyn, jidadka tareenada, buundooyinka, biyo-mareennada, tunnelyada, xakamaynta daadadka, biyo-xireennada iyo xarumaha kale ee dadweynaha, ilaa aasaaska, alwaaxyada, tiirarka, darbiyada iyo saqafka guryaha, birta dib-u-celinta waa qalab dhismeed oo lagama maarmaan ah.Waxaa jira baahi xooggan oo loo qabo birta dib-u-dhiska dhismaha kaabayaasha iyo horumarinta xooggan ee hantida ma-guurtada ah.